Gold AQ Plus-Korjoogteynta Gulukoosta Dhiigga ee taxanaha-Sinocare
Dahab AQ Plus
1. Isticmaal la doonayo
Nidaamka kormeerka gulukoosta dhiiga ee Gold AQ Plus waxaa loogu tala galay in lagu isticmaalo cabirka qiyaasta gulukoosta ee dhiiga bini aadamka oo dhan laga soo qaatay farta farta (gunta madaxa) ama xididka (halbowlaha) ama halbowlaha (halbowlaha). Waxaa loogu talagalay inay u isticmaalaan dadka qaba sonkorowga guriga ama barta kiliinikada si ay uga caawiyaan la socodka waxtarka barnaamijyadooda xakameynta sonkorowga.
Tijaabada gulukoosta waxay ku saleysantahay cabirka korantada hada jirta taasoo ay sababtay ficil celinta gulukooska ee Fulin gulukooska FAD-da ee korantada qulqulka. Muunadda xaddiga dhiiga ama xakameynta ayaa loo soo qaatey caarada xarigga baaritaanka iyada oo loo marayo ficil xaddidan. Gulukooska ee muunadda ku jira waxay kaga falcelisaa FAD gulukooska FAD-da waxayna soo saartaa elektaronno, taasoo soo saarta koronto hadda jirta. Mitirka gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus ayaa cabbira korantada hada jirta waxayna xisaabisaa natiijada gulukoosta. Natiijada gulukoosta waxaa soo saaray mitirka gudaha unugyada mg / dL ama mmol / L.
Qalabka tijaabada gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus waxaa loogu tala galay in lagu isticmaalo mitirka gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus si loo cabbiro xaddiga gulukoosta dhiigga ee ah dhiig cusub oo dhiig leh ama halbowle dhiig ama halbowle dhiig. Qalabka tijaabada gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus ee loo isticmaalo mitirka gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus wuxuu bixiyaa nidaam baaritaan oo dhammaystiran oo loogu talagalay in lagu isticmaalo baaritaanka cudurka 'vitro' ee dadka qaba cudurka kaadi macaan. Xarigga tijaabada gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus uma baahna nambar nambar. Fadlan tixraac qaybta "Sameynta Baaritaanka Gulukoosta Dhiigga" qaybta tilmaamaha oo dhammaystiran.
Xarigga tijaabada gulukoosta dhiigga ee Gold AQ Plus ayaa ka kooban qaybaha soo socda:
Cabbirka dhiigga 0.8μL
Waqtiga cabirka 5s
Xaaladda mitirka / gaadiidka -20C ~ 55 ℃
aragti (103mm (L) x 60mm (W) x 24mm (H)
Miisaanka ku saabsan 59g
il Power 2 baytariyada macdanta alkaline
Xasuusta 999 oo cabbiraadda sonkorta dhiigga ayaa leh
taariikhda iyo waqtiga
200 Natiijooyinka cabbiraadda Xakameynta leh
Qoyaan qaraabo: 10% ~ 90% RH (biyo-aan-buuxin)
Altitude: Ilaa 10100 cagood (3078 mitir)
Xusuusin: U isticmaal gudaha shuruudaha deegaanka ee cayiman oo keliya.
Xaaladda hawlgalka 10 ℃ ~ 35C≤80% RH
Tijaabi iskudhafka kiimikada isku-darka kiimikada Gulukooska dhiiga ee FD glucosease, potassium ferricyanide,
maaddooyinka aan firfircoonayn
Xakamee xalka kiimikada xalka Biyo, gulukoos, ka-ilaalin, midab, tufaax fosfoos,
viscosity xoojinta wakiilada
Imtixaanka xaabada kaydinta weelka 1℃~30℃ 10%~90%RH
nolosha shelf 10 sano (oo lagu qiyaasey imtixaanka 7 jeer maalintii）)
Inta lagu gudajiray isticmaalka, adeegsaduhu waa inuu ilaaliyaa sheyga
tixraac shuruudaha buug-gacmeedka isticmaalahan.
1) 99.99% electrode dahabka ah, dhaqdhaqaaq ah 1,400 jeer ka badan kaarboonka korantada.
2) Iyadoo leh qalab koronto oo kireeya iyo iska caabin aad u xoog badan.
3) Awoodda inuu ku ogaado heerkulka saamiga dhiigga, HCT iyo heerkulka ambiil ahaan si sax ah, oo wuxuu si otomaatig ah u sixi karaa khaladaadka natiijada ee sababay qodobada kore.